Talata 20 Aprily 2021
Tantely Ny famoronana boaty fanomezana tantely dia manome aingam-panahy ny "lalan'ny ekolojia" an'i Shennongjia miaraka amin'ny zavamaniry be dia be ary tontolo iainana voajanahary tsara. Fiarovana ny tontolo ekolojika ao an-toerana no lohahevitra mamorona ny volavola. Mampiasa ny zavakanto nentin-drazana vita an-tsary sy alokaloka an-java-kanto ny haingon-trano mba hanehoana ny ekolojika voajanahary eo an-toerana ary biby dimy tsy fahita firy ary tandindonin'ireo biby voaro voalohany. Afo sy hazo taratasy matevina dia ampiasaina amin'ny fitaovana fonosana, izay maneho ny fiheverana ny toetra sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny boaty ivelany dia azo ampiasaina ho toy ny boaty fitahirizana be dia be hampiasaina indray.
Lanton'ny Lakozia Ity kitapo ity dia natao hanampiana ny olona hitazona ny toerana tsy misy atsy na ny aroa. Ny fijerena ny fihetsiky ny olona isan’andro, ny ekipa mpanao famolavolana dia mahita ny ilain’ny olona hipetraka eo ambony fitoeran-dàlana mandritra ny fotoana fohy kokoa toy ny fipetrahana an-dakozia ho an'ny fitsidihana haingana, izay nanentana ny ekipa hamorona io fitoeram-boalavo io hametrahana ny trangany manokana. Io lalimoara io dia namboarina tamin'ny ampahany sy ny rafitra kely indrindra, mahatonga ny fihoara azo lafo sy lafo vidy ho an'ny mpividy sy mpivarotra amin'ny alàlan'ny fiheverana ny vokatra mamatsy azy.
Infographic Miaraka Aminny Gif Animated
Infographic Miaraka Aminny Gif Animated Ny tetik'asa All In One Experience Consumption dia Big Data Infographic mampiseho fampahalalana toy ny antony, karazana, ary fanjifana ny mpitsidika amin'ireo toeram-pivarotana sarotra. Ny votoatiny tena lehibe dia ahitana ny solontena telo voamarina avy amin'ny famakafakana ny Big Data, ary namboarina avy any ambony ka hatrany ambany izy ireo araka ny filaharany. Ireo sary dia atao amin'ny fampiasana teknika isometric ary natambatra hampiasa ny loko solontena isaky ny lohahevitra.
Ny Takelaka Sarimihetsika
Ny Takelaka Sarimihetsika Navoaka ny sary mihetsika momba ny «Mosaic Portrait» ho toy ny paositra. Izy io dia mitantara ny tantaran'ny zazavavy iray izay voatafika. Matetika ny fotsy dia milazalaza amin'ny fahafatesana sy ny mariky ny fahadiovana. Nisafidy ny hanafina ny hafatry ny "fahafatesana" ao ambadiky ny toe-tsaina mangina sy malefaka ity takelaka ity, mba hampisongadinana ny fihetseham-po mahery vaika ao anaty fahanginana. Mandritra izany fotoana izany, ny lozisialy dia nampiditra ireo singa manintona sy sary famantarana ao anaty sary, ka nahatonga fisainana sy fikajiana bebe kokoa amin'ny asan'ny sarimihetsika.
calendar 2013 “Module” Kalandrie Asabotsy 19 Jona
calendar 2013 “Town” Kalandrie Zoma 18 Jona
calendar 2013 “Rocking Chair” Ny Kalandrie Alakamisy 17 Jona
Ny Sakafo Snack Fonosana Sakafo Tantely Lanton'ny Lakozia Infographic Miaraka Aminny Gif Animated Ny Takelaka Sarimihetsika